မေးခွန်း ကြိုဆိုပါတယ်! ငါဆေးဝါး Lithiumeel စိတ်ဝင်စားမိပါတယ်။ သူကလျှောက်လွှာနှစ်ခုဒေသများရှိပါတယ်, ဒါကြောင့် (ထိုသေတ္တာပေါ်မှာဤအချက်အလက်မသတ်မှတ်ထားပါသည်) ကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ပါတယ်ကတည်းကအမျိုး, သင်နှင့်ညွှန်ကြားချက်များကို ကျေးဇူးပြု. ပေးပို့နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ကက်သရင်းနှင့်စပ်လျဉ်း။
ကံမကောင်းစွာပဲကျနော်တို့ညွှန်ကြားချက်မပို့နိုင်ပါ။ ကျနော်တို့ဆွစ်ဇာလန်မှာရှိတဲ့ဂိုဒေါင်ကနေဝယ်ဖို့, သင်မဝယ်သည်အထိညွှန်ကြားချက်ဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ သငျသညျဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံဆေးဘက်ဆိုင်ရာစက်ပစ္စည်းမဆို directory ကိုစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်ဆောင်းပါးအရေအတွက်အားဖြင့်အမိန့်ပေးနိုင်သည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုဆေးဝါးသူဖြစ်ပါတယ်။
info@swiss-apteka.com ဆောင်းပါးမှာကျွန်တော်တို့ကိုရေးပါနဲ့ကျနော်တို့က၎င်း၏ရရှိနိုင်မှုကို update ပါလိမ့်မယ်။
ယခုအချိန်တွင်, ဆွစ်ဇာလန်၌ရောင်းဖို့မဟုတ်ပါ။ ဂျာမန်ဗားရှင်းကိုကြည့်ပါလည်းဖြန့်ဝေဘို့မရရှိနိုင်ပါသည်:
သင့်ရဲ့ E-mail ကိုရိုက်ထည့်ပေးပါ
စာသားမ applications များ